७ फोटोमा हेर्नुहोस् अमेरिकाले यसरी गरेको थियो सिरियामा हवाइ आक्रमण , Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
७ फोटोमा हेर्नुहोस् अमेरिकाले यसरी गरेको थियो सिरियामा हवाइ आक्रमण
एजेन्सी। ७ अप्रिलमा सिरियामा भएको रासायनिक आक्रमणको जवाफ भन्दै अमेरिकाले शुक्रबार राती सिरियामा सय भन्दा धेरै मिसाइल आक्रमण गर्यो । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनका अनुसार सिरियाको राजधानी दमास्कस र होम्स सहरमा १ सयभन्दा बढी मिसाइल प्रहार गरिएको थियो । यही आक्रमणका कारण अमेरिका र रुसबीच सम्बन्ध बिग्रिएको छ । रुसले सिरियाको समर्थन गरिरहेको छ । हेर्नुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया एपीले खिचेका ७ फोटोहरुमा आक्रमणका दृश्यहरु ।